WordPress: Manampia bara hafatra ambony | Martech Zone
WordPress: Manampia bara hafatra ambony
Alahady, Novambra 27, 2011 Alatsinainy, Novambra 28, 2011 Douglas Karr
Miaraka amin'ilay tranonkala vaovao aho, nitady a bara ambony ho an'ny WordPress nandritra ny fotoana kelikely. Ny famolavolana lohahevitra farany nataonay dia nanana fizarana iray manontolo izay azo nesorina izay nanao dokambarotra momba ny anay famandrihana mailaka. Nampitombo be ny isan'ny mpanjifa izany ka nampidiriko mivantana tamin'ny lohatenin'ny lohahevitra ny sehatr'ilay famandrihana.
Izao fotsiny no tadiaviko a bara ambony hitazomana ny mpamaky hatrany ny vaovao momba ny hafatra lehibe tianay hampahatsiahivina azy ireo… ao anatin'izany ny vaovao sy ny hetsika. Hanoratra ity mivantana amin'ny lohahevitray aho fa nahita WP-Topbar, plugin bara ambony voasoratra tsara ho an'ny WordPress. Misy ny sasany any izay manana fiasa hafa… toy ny hafatra mihodina na ny fandaharam-potoana fandefasana hafatra, saingy ny fahatsoran'ity plugin ity no nandresy azy ireo.
Nankasitrahako fa ny bara ambony dia tsy hardcoded teo an-tampon'ny atiny pejy; fa kosa, novokarina tamin'ny dinamika izy io ary nipoitra niaraka tamin'ny fanamoriana izay misy fahatarana sy hafainganam-pandeha hanehoana azy… tena mikasika! Azonao atao ny mifehy ny loko (ary na ny sary any aoriana) aza ny bara, ny hafatra, manampy rohy, ary mampihatra ny CSS anao manokana aza. Ny fitondrana dia manana topi-maso ihany koa mba hahafahanao mijery ireo fanovana rehetra nataonao alohan'ny hametrahana azy mivantana.
Mariho, misy plugins fisotroana ambony indrindra eny an-tsena izay mandoa vola… saingy heveriko fa sarobidy kokoa ity iray ity!
UPDATE: Nanao fanavaozana ny plugin aho. Efa manomboka amin'ny wp_footer izao fa tsy wp_head (WordPress io API resaka) ary nohavaoziko ny div mba hananana karapanondro sy fomba fanamboarana ny bara fa tsy hoe havana. Amin'ity fomba ity, mijanona eo ny bara rehefa mandroso ny pejy ianao.
Tags: bara hafatraplugin bara hafatraanjan'nybara ambonyplugin bara ambonyplugin WordPressbara ambony wordpresswp_footerwp_head
Slalomare - Goavana milamina amin'ny marketing amin'ny atiny
27 Nov 2011 tamin'ny 7:10 PM
27 Nov 2011 tamin'ny 7:40 PM
Miloka ianao, George!
Dec 11, 2011 amin'ny 1: 18 AM
Tena mipoitra ny bara hafatra ambony.
misaotra amin'ny fizarana!
Dec 11, 2011 amin'ny 1: 45 AM
Mar 21, 2012 ao amin'ny 10: PM PM
Nanandrana ny rohinao aho fa tsy eo intsony ilay plugin. Aiza no hahazoako azy Karr?
Sep 7, 2012 amin'ny 8: 51 AM
Fa maninona no tsy mety amiko ity? Nanandrana an'ity plugin ity aho 6 volana lasa izay ary tsy hitako hoe ahoana. Napetraka tanteraka izy ary tantiko tsara ny fikirakira heveriko fa tsy miseho amin'ny pejy fandraisana na amin'ny pejy id nametrahako azy. Naharitra adiny iray mahery aho vao nahomby. Leo be aho. Fanampiana olona!
Ya napetrako tsara koa ny fotoana. (amin'ny millisecods) ary ny daty koa. Inona no malahelo ahy izao?
Sep 7, 2012 amin'ny 9: 26 AM
Angamba karazana fifandonana amin'ny plugin iray hafa? Azonao atao ny manandrana mampandeha ny plugins rehetra ary mihazakazaka fotsiny mba hahitana izay mitranga.
Mar 19, 2013 amin'ny 1: 03 AM
Nahomby izany rehefa avy nanandrana zavatra maro. Io dia nanamboatra azy - mamerina amin'ny laoniny ny default. Ny kinova ankehitriny dia miasa tsy misy olana
26 Nov 2012 tamin'ny 5:41 PM
Misaotra tamin'ny fizarana, izay notadiaviko fotsiny.
21 Okt 2013 amin'ny 5:08 PM
Misaotra tamin'ny lahatsoratra tsara. Tena nitady an'io aho. Na izany aza dia nitady safidy hafa "hello bar" aho ary toa tsy nisy niasa tamiko. Misaotra amin'ity lahatsoratra manazava ity.